Macron oo ku hanjabay in 'Faransiisku uu ka bixi doono Midawga Yurub' - BBC News Somali
Macron oo ku hanjabay in 'Faransiisku uu ka bixi doono Midawga Yurub'
Image caption Emmanuel Macron
Ninka ugu cadcad doorashada madaxtinnimada ee Faransiiska ayaa u sheegay BBC in Midowga Yurub ay waajib ku tahay inuu is beddello sameeyo amaba uu wajaho suurtogalnimada ah inuu Faransiiska isaga baxo.
Emmanuel Macron oo siyaasaddiisa ku wajahan Midawga Yurub ay dhexdhexaad tahay ayaa hadalkan sheegay xilli isaga iyo haweeneyda la tartamaysa ee mucaaradka garabka midig Marine Le Pen ay galeen toddobaadka ugu dambeeya ee ololaha.
Le Pen ayaa muujisay dareenkeeda sida ay uga soo horjeeddo Midawga Yurub, waxayna ballan qaadday in afti loo qaado xubinnimada Faransiiska.
Waxay ku guuleysatay taageerada deegaannada miyiga ah iyo kuwii hore ee warshadaha iyadoo u ballan qaadday dib ula wareegidda xudduudaha Faransiiska ee Midawga Yurub uu gacanta ku hayo ayna joojin doonto soo galootiga.
"Waxaan ahay qof taageersan Yurubnimada, waxaan inta doorashadan lagu jiro si joogto ah u difaacay fikradda iyo siyaasadaha Yurubnimada, sababtoo ah waxaan aaminsanahay inay aad muhiim ugu tahay dadka Faransiiska iyo halka uu dalkeenna kaga jiro caalamiyeynta," Macron, oo ah hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa dhawaan la aasaasay ee En Marche!, ayaa u sheegay BBC.
"Balse isla markaana waa inaan wajahnaa xaaladda, si aan u dhegeysanno dadkeenna, iyo inaan dhegeysanno xaqiiqda ah inay maanta aad u xanaaqsan yihiin, u yihiin kuwo aan dulqaad lahayn isla markaana cakirnaanta Midawga Yurub ma ahan mid joogto sii ahaan karta."
Macron ayaa intaa ku daray in haddii uu oggolaan lahaa Midawga Yurub inay u sii shaqeyso sideedii hore ay taas noqoneyso meel-ka-dhac.